पिठ्युँमा बच्चा बोकेर ड्युटी गर्ने ट्राफिक जोडीको प्रेम कहानी– सडकमा सिट्ठी फुक्दाफुक्दै लभ….! – Khabar Patrika Np
पिठ्युँमा बच्चा बोकेर ड्युटी गर्ने ट्राफिक जोडीको प्रेम कहानी– सडकमा सिट्ठी फुक्दाफुक्दै लभ….!
प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत्र २८, २०७७ समय: २२:५३:०४
सोही समयमा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बग्गीखाना मातहत काम गर्ने विराटनगर पोखरियाका ट्राफिक प्रहरी हबल्दार अजित राउत पनि सरुवा भएर इलाम गए । अजित इलाम पुग्दैगर्दा बोना सडकमा ड्युटीमै थिइन् । अजितले बोनालाई पहिलोपटक सडकमै देखे । देख्नेबित्तिकै उनलाई बोना मन परेको रहेछ, तर लजालु स्वभावका अजितले बोल्ने हिम्मत भने गरेनन् ।